I-7 yezona mpazamo zixhaphakileyo ze-WhatsApp kunye nesisombululo | Iindaba zeGajethi
I-7 yezona mpazamo zixhaphakileyo zikaWhatsApp kunye nesisombululo sabo
WhatsApp Namhlanje sesona sicelo sokusetyenziswa kwemiyalezo ekhawulezileyo kwihlabathi liphela, nangona ezinye ezinje ngeTelegram okanye iLine ngokuqhubekayo zidlala indima ekhokelayo, nangona zingasondelanga kwinani labasebenzisi abalawulwa yinkonzo ephethwe nguFacebook. Ngelishwa i-WhatsApp sisicelo esisinika ezinye iingxaki kunye nentloko, ethi namhlanje sizame ukuyisombulula.
Uninzi lweengxaki esidibana nazo kuWhatsApp ziqhelekile kwaye uninzi lwazo lunesisombululo esilula. Ngale nqaku siza kukubonisa I-7 yezona mpazamo zixhaphakileyo zikaWhatsApp kunye nesisombululo sabo, ukuze kuthi ukuba unelishwa lokubandezeleka enye okanye ezingaphezulu kuzo, ungayisombulula ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kokwenza ubunzima kakhulu ebomini bakho.
1 Andikwazi ukufaka iWhatsApp
2 Abafowunelwa bam ababonakali kwi-WhatsApp
3 Iividiyo zikhutshelwa zodwa emva kwedatha yenqanaba lethu
4 Andiva amazwi elizwi
5 Ndilinde ndilinde kodwa ndingaze ndifumane ikhowudi yokuvula
6 Andiluboni uqhagamshelo lokugqibela lomfowunelwa
7 Iminxeba yelizwi ikumgangatho ombi kakhulu
Andikwazi ukufaka iWhatsApp
Bonke okanye phantse wonke umntu one-smartphone ufuna ukufaka i-WhatsApp ngokukhawuleza ukuba bayayivula ukuze bakwazi ukunxibelelana nosapho okanye nabahlobo. Ngelishwa, ayinguye wonke umntu onokufaka imiyalezo yemiyalezo ekhawulezileyo kwisiphelo sabo, nangona inokubangelwa zizizathu ezininzi.
Eyokuqala inokuba kungenxa yokuba unazo ingxaki ngenombolo yakho yefowuni, ukuba ayisebenzi kakuhle okanye ngendlela echanekileyo. Eyesibini inokuba kungenxa yokuba ukhe wanengxaki yokuvalwa, enokubangelwa zizizathu ezahlukeneyo, kwaye kunokuba lula okanye kubenzima ukuphuma kuyo-
Ukuba awukho nakweliphi na kula matyala mabini siwachazileyo, kunokwenzeka ukuba awunakukwazi ukufaka i-WhatsApp kuba uguqulelo lwesoftwe yeselfowuni yakho aluhambelani nenkonzo. Umzekelo Ukuba usebenzisa i-smartphone enenkqubo yokusebenza ye-Android 2.2 okanye esezantsi, ungazami njengoko ungazukuyifaka, ngendlela eqhelekileyo nokuba ungazama kangakanani.
Abafowunelwa bam ababonakali kwi-WhatsApp
Le isenokuba yeyona mpazamo ixhaphakileyo phantse kubo bonke abasebenzisi kwi-WhatsApp. Kwaye akukho mntu ukhululekile ukuba xa ufaka usetyenziso, sizama ukufikelela kunxibelelwano lwethu kwaye akukho namnye amaxesha amaninzi esiwahlaziyayo. Oku kunokuba ngenxa yokulayisha abafowunelwa bakho kwiakhawunti kaGoogle okanye ngenxa yokuba kungekho nomnye umnxeba ogcinwe ngqo kwi-SIM khadi yakho okanye kwi-smartphone yakho.
Ukuba unabafowunelwa ogcinwe kwiakhawunti yakho kaGoogle, kuya kufuneka ungqamane nabo ngokuchanekileyo, ukuze bavele kamva kuWhatsApp. Yiya kuseto, emva koko uye kwiiAkhawunti kwaye ekugqibeleni uye kuGoogle ukwenza ukungqamanisa kunye nayo ukubonakala kwabo bonke abafowunelwa.
Kwimeko apho ungenalo ukhuphelo lwabafowunelwa bakho, nokuba kuGoogle okanye ngenye indlela, kuya kufuneka ubabuyise ngesandla, ukuze kamva bavele kuWhatsApp.
Iividiyo zikhutshelwa zodwa emva kwedatha yenqanaba lethu
Akukho mntu ushiya ikhaya ngaphandle kokuphatha isixhobo esiphathwayo epokothweni okanye engxoweni, kwaye baye baba yinxalenye ebalulekileyo yobomi bethu, phantse kakhulu njengedatha esinayo. Ngaphandle kwedatha akunakwenzeka ukuba uqhagamshelane neenethiwekhi zethu zentlalo, okanye ukuphatha i-WhatsApp ngesantya esithile.
Enye yeempazamo, okanye enye yeengxaki esinokuyifumana kuWhatsApp, yile ukukhuphela ngokuzenzekelayo iividiyo okanye iifoto, ezikhokelela ekusetyenzisweni kwedatha, ngamanye amaxesha akuyomfuneko. Kwaye ngubani ongenawo umhlobo oqhelekileyo, okanye ongaphakathi kweqela elikhulu, apho basithumela khona iividiyo ngokuqhubekayo kunye neefoto zayo yonke into eyenzeka kubo imini yonke.
Ukuthintela iividiyo okanye imifanekiso ekubeni ikhutshelwe ngokuzenzekelayo, kuya kufuneka uyiguqule kuseto lweWhatsApp, kwaye uyitshintshe ukuze ikhutshelwe kuphela xa sixhunyiwe kwinethiwekhi yeWiFi. Gcina ukhumbula ukuba uninzi lweenkampani zeefowuni eziphathwayo zihlawulisa idatha egqithileyo, ke kuya kufuneka sithathe ukhathalelo oluphezulu kwabo basinika ixabiso langaphambili lexabiso lethu.
Andiva amazwi elizwi
Sonke sithumela kwaye sifumana amanqaku elizwi mihla le kwaye akukho namnye unamathandabuzo malunga nendlela yokwenza oko. Into engaziwayo ngabantu abaninzi kukuba i-WhatsApp isebenzisa isivamvo sokusondela kwisixhobo sakho esiphathwayo ukwehlisa ivolumu yesandi xa sibona umzimba okufutshane. Oku kuthetha ukuba ngalo lonke ixesha uzisa i-terminal yakho endlebeni yakho ukuze uve ngcono imemo yelizwi, awuva nto kwaphela.
Ukusombulula le ngxaki, Kuya kufuneka uzame ukungazisi i-smartphone yakho endlebeni yakho okanye kulo naliphi na ilungu lomzimba wakho, okanye usebenzise ii-headphone oko kuyakuvumela ukuba umamele amanqaku elizwi ngaphandle kwengxaki kwaye ngaphezu kwako konke ugcine ubumfihlo bakho bukhuselekile kuye nawuphi na omnye umntu.
Ukuba akukho ndlela unokukuva ngayo ilizwi, gcina engqondweni ukuba isithethi sefowuni yakho sinokungaphumeleli ngenxa yoko awuzukukhetha kodwa ukuyisa kwinkonzo yezobuchwephesha kwaye loo mpazamo ayinanto yakwenza nayo. kunye noWhatsApp.
Ndilinde ndilinde kodwa ndingaze ndifumane ikhowudi yokuvula
Ukuqala ukusebenzisa i-WhatsApp, kubalulekile ukwenza ukuba iakhawunti yakho isebenze ngeSMS. Inkonzo yemiyalezo ekhawulezileyo ngokwayo ibhaqa umyalezo obhaliweyo kwaye asizukuvula imiyalezo yemiyalezo kwiimeko ezininzi. Ukongeza, kangangexesha elithile sikwazile ukuvula iakhawunti yethu ngokufumana umnxeba, abaya kuthi ngawo basinike ikhowudi yethu.
Ngamanye amaxesha i-SMS enekhowudi yokuvula ayifikanga nokuba silinde ixesha elingakanani, nangona siza kuhlala sisebenza ngokufowuna ngelizwi, enganiki themba kakhulu kubasebenzisi abaninzi nangona ikhuselekile ngokupheleleyo. Ukuba le yimeko yakho, jonga ukuba unayo iSIM khadi efakwe kwisiphelo sakho ekuvumela ukuba ufumane iSMS okanye ubeke ngokufanelekileyo isimaphambili selizwe lakho ukuze uthumele ikhowudi yokuvula.
Andiluboni uqhagamshelo lokugqibela lomfowunelwa
Enye yezona mpazamo zixhaphakileyo esinokuzifumana kuWhatsApp yile ungaliboni ixesha loqhagamshelo lokugqibela lomnye wabafowunelwa bethu, Into eluncedo kakhulu kubo bonke abahlebayo ngendalo. Nangona kunjalo, kusenokwenzeka ukuba asijonganga nempazamo kwaye kungenxa yokuba inkonzo yemiyalezo ekhawulezileyo ibisivumela ukuba siguqule ubumfihlo kwaye sigcine ixesha lethu lonxibelelwano lokugqibela lifihliwe.
Ukusuka kuseto kunye nokufikelela kwiAkhawunti singakhetha ukuba sifuna ukubonisa umhla kunye nexesha lonxibelelwano lwethu lokugqibela. Ewe kunjalo, gcinani engqondweni ukuba ukuba asivumeli unxibelelwano lwethu lokugqibela luboniswe, asizukubona nabo sinxibelelana nabo.
Ukuba awuliboni ixesha lokugqibela loqhakamshelwano lwabafowunelwa bakho, ungakhathazeki, ayisiyiyo impazamo kuWhatsApp, kodwa ukhubaze ithuba lokubonisa umhla kunye nexesha lonxibelelwano lokugqibela. Ngokuyivula nje, uya kuba nakho ukubona kunye nokuhleba ngeliphi ixesha abafowunelwa bakho abagqibelene ngalo, kodwa hlala ukhumbula ukuba baya kuba nakho ukubona ezakho ngaphandle kwezithintelo.
Iminxeba yelizwi ikumgangatho ombi kakhulu
I-WhatsApp ibonelela bonke abasebenzisi ngamathuba okwenza iminxeba yelizwi, eyenziweyo kusetyenziswa inqanaba ledatha yethu okanye uqhagamshelo lweWiFi. Ukuba uqaphela ukuba iifowuni ozenzayo okanye ozifumanayo zikumgangatho ophantsi kakhulu, ubukhulu becala kungenxa yokunxibelelana ne-Intanethi okungalunganga okanye okungalunganga.
Ukulungisa le mpazamo, nje Kuya kufuneka ujonge unxibelelwano olungcono kwinethiwekhi yenethiwekhi. Ukuba ufuna iifowuni zezwi zibe nomgangatho ofanelekileyo, kuya kufuneka uzame ukunxibelelana nenethiwekhi yeWiFi ngalo lonke ixesha kuba kungenjalo eyona nto iqhelekileyo kukuba banomgangatho ophantsi kakhulu. Ukuba awukwazi ukufikelela kwinethiwekhi ye-WiFi, kufuneka okungenani uzame ukunxibelelana nenethiwekhi ye-4G, nangona gcina engqondweni ukuba ukusetyenziswa kwedatha kolu hlobo lweefowuni kuhlala kuphezulu kakhulu.
Ngale nqaku siye sajonga ezinye zeempazamo zeWhatsApp, ukucebisa ngezisombululo, kwaye kuqhelekile. Ukuba ufumana impazamo engekho kolu luhlu, ungaya kwiphepha loncedo apho isicelo semiyalezo sifikelele khona kwiphepha laseburhulumenteni.
Kananjalo kwaye okoko nje singakhange sijongane nempazamo eyintlekele okanye sele uyazi ukuba ayinasisombululo, ungathetha nathi kwaye sizakuzama ukukunceda ngayo, kangangoko sinakho.
Ngaba ukwazile ukusombulula impazamo ebuyiswe nguWhatsApp kuwe ngenxa yeli nqaku?. Sitshele kwisithuba esigciniweyo sokuphawula kule post okanye ngenye yeendlela zonxibelelwano esikhoyo, kwaye sikulungele ukukunika isandla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-7 yezona mpazamo zixhaphakileyo zikaWhatsApp kunye nesisombululo sabo
USonia Cedenilla Pablos sitsho
Ukusombulula ezona ngxaki zixhaphakileyo zewhatsapp ndisebenzisa le app endikubonisa yona; https://play.google.com/store/apps/details?id=faq.whatsapphelp&hl=es
Kum iluncedo kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa, ndiyacebisa.
Phendula uSonia Cedenilla Pablos
Yile nto i-aquarium erobotic ijongeka ngayo njenge-HEXBUG AQUABOT jellyfish
Ukusoloko kwi-Galaxy Qaphela i-7 ivula zonke izicelo